कृषिको विकासमा स्थानीय सरकार | Nagarik News - Nepal Republic Media
१४ श्रावण २०७७ ७ मिनेट पाठ
संविधानले नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभतासम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि तर्जुमा भएको छ तर ऐन प्रमाणीकरण भएको २१ महिना बितिसक्दासमेत नियमावली भनेबनेको छैन्।
संविधानमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा लागु नभएसम्म नागरिकले त्यसको महत्व बोध गर्ने छैनन्। यसका लागि नीति र कानुनका अतिरिक्त अहिलेको कृषिलाई नसपारी खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन्। बहुसंख्यक नेपालीको पेसा कृषि भए पनि ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ। यसो हुँदा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्तिअहिलेको ढाँचामा समीक्षा आवश्यक भएको छ।
कृषि कसरी सपार्ने भन्नेमा धेरैको चासो छ। किसान, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत कृषि विकासका लागि प्रयास भइरहेको छ तर सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो परनिर्भरता बढेर गइरहेको छ।
यसका लागि स्थानीय तहले गर्ने पहिलो काम भनेको भूमि, कृषि र कृषकको परिवेश विश्लेषण नै हो। आफ्नो पालिकामा कृषि भूमि कति छ ? यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ ? कृषकहरूको अवस्था र सामथ्र्य के हो ? खाद्यान्न आयात र निर्यातको अहिलेको अवस्था के छ ? अवसर के के छन् ? यस विषयमा मसिनो विश्लेषण गर्नुपर्छ। विश्लेषणको प्रक्रियामा सबै वर्गका किसानको सहभागिता हुनुपर्छ। यस्तो विश्लेषणपछि भूउपयोग र कृषि विकासको वडागत योजना बनाउनुपर्छ। र, सोलाई समेटेर गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरको कृषि विकासको योजना बनाउनुपर्छ। अहिलेको जस्तो केही क्रियाकलाप मात्र राखेर पुग्दैन। योजना वडागत र विस्तृत चाहिन्छ। दृष्टिकोणसहितको योजनामा भूमि,श्रम र रोजगारीको अन्तरसम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ।
खाद्यान्न उत्पादनमा आफूलाई एक नम्बर सावित गर्दै निर्यातमा समेत अब्बल देखिएका भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान सबैले भूमिसुधारलाई कृषि सुधारको पहिलो र अभिन्न कार्यका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। र, यस प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई बढी सक्षम र जिम्मेवार बनाएर लगेका थिए। भूमिमाथिको स्वामित्वको विषयसँग दीर्घकालीन लगानी जोडिने हुँदा अरुको जमिन कमाउनेले छिटै आम्दानी हुने बाली लगाउँछ। र, दीर्घकालीन लाभ हुनेगरी लगानी गर्दैन्। त्यतिमात्र हैन, अरुको जग्गा कमाउनेले इच्छाएको खेती गर्न नपाउने अवस्था हुन सक्छ। चौथाइ कृषक परिवार अरूको जग्गा कमाइरहेका अहिलेको अवस्थामा हेरफेर नल्याइ अर्थात दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने अवस्था नबनाइ कृषि सपार्न सकिँदैन। यसका लागि स्थानीय तहले आफूसँग भएको भूमिको उपयोगका विषयमा दीर्घकालीन सोचपत्र तयार पार्नुपर्छ। खेर गइरहेको भूमि सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जग्गा कमाउने र कमाउन दिनेको लगत व्यवस्थित गरी लामो अवधि खेती गर्न पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ।
किसानहरूलाई आफैँं पनि थप ज्ञानको खोजी प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। सूचना दिने हिसावले मात्र सोच्नुहँुदैन। जब उनीहरू ज्ञानको खोजीको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् यसले दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ। अहिले किसानमा भएको ज्ञानको आदानरूप्रदान हुने स्वतः प्रक्रियाहरू भत्कँदै गएका छन्। यसको पुनर्निर्माण आवश्यक छ। प्रत्येक परिवार, समुदाय र स्थानीय तहमा सिकाइका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ। किसानलाई समूह वा सहकारीमा संगठित गरी सशक्त तुल्याइनुपर्छ। आफ्ना विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने तुल्याइनुपर्छ। किसानको संगठन र सशक्तीकरणका लागि पनि स्थानीय तहले नै बढी भूमिका खेल्न सक्छन्। जुन कृषि क्षेत्र सुधारको अनिवार्य सर्त हो। किसानहरू सशक्त नभई जतिसुकै लगानी गरेपनि सोको सही सदुपयोग हुँदैंन।
फगत भौतीक सामग्री र कर्मचारी भएको कार्यालय कदापि ज्ञान केन्द्र हुन सक्दैन। ज्ञान केन्द्रमा किसान आएर त्यहाँ पालिएका पशुका जात र तिनले दिने लाभका आधारमा बुझ्न पाउनुपर्छ। विभिन्न खेतीपाती र बालीनालीको अवलोकन गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ सानोतिनो किसानको पाठशाला हुनुपर्छ। आफैँं अभ्यास गरेर सिक्ने अवसरहरू सिर्जना हुनुपर्छ। किसानलाई चाहिने पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने सरल सामग्रीहरू स्थानीय भाषामा विकास भएको हुनुपर्छ। नर्सरीहरू स्थापना भएका, हेरिरहुँ, बसिरहुँ जस्तो किसानलाई खुसी बनाउने केन्द्र मात्र ज्ञान केन्द्र हुन सक्छ। अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ। अहिलेकै निरन्तरता विलकुल रोकिनुपर्छ।
हरेक स्थानीय तहले भूमि र कृषिको सोचपत्र तयार पार्ने, त्यसका आधारमा स्थानीय परिवेश समेट्ने गरी भूउपयोग र कृषिको विशेष योजना बनाउने र सोका लागि आवश्यक भूमि र कृषिको स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने कार्य स्थानीय तहको प्राथामिकताका विषय हुनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ १०:४१ बुधबार
स्थानीय सरकार कृषि विकास